एउटै वातावरणमा कसैलाई जाडो कसैलाई गर्मि किन ? | एउटै वातावरणमा कसैलाई जाडो कसैलाई गर्मि किन ? – हिपमत
एउटै वातावरणमा कसैलाई जाडो कसैलाई गर्मि किन ?
काठमाडौं,पौष १३:भरखर भरखरैको कुरा हो, एउटा विवाह भोजमा जाने निम्तो आयो । निम्तो मान्न हामी सपरिवार भोजमा सरिक भयौं । जाडोको महिना हामी सबैले बाक्लै लुगा लगाएका थियौं । तर सो विवाहमा सरिक केही महिलाहरु भने विपरीत पोशाकमा थिए । उनीहरुको पातलो पोशाक देखेर मेरी १० वर्षीया छोरीले मसँग बालसुलभ प्रश्न गरिन् ः बाबा, हामीलाई त जाडो लागिरहेको छ, तर आन्टीहरुलाई चाहिँ जाडो लाग्दैन हो ?